ကမ္ဘောဇဌာနေမှ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ မြို့လေး မိုးနဲ (ခေါ်) ရှမ်းပုဂံ – YANGON STYLE
ကမ္ဘောဇဌာနေမှ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ မြို့လေး မိုးနဲ (ခေါ်) ရှမ်းပုဂံ
လွိုင်လင်းကျောင်းရှေ့က မွေတော် စေတီစုများ
သဒ္ဓါ ဒီတခါဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရင်း သူငယ်ချင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်ဘက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးနဲ မြို့လေးကတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၁၇၉ ပေတွင် တည်ရှိပြီး BC 500 ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက တည်ခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် ရှမ်းစော်ဘွားများ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်း
သမိုင်းဝင် မွေတော်စေတီစုများ၊ သဘာဝအလှအပများ နှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သမိုင်းကြောင်းများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်ရဲ့ ပုဂံ မြို့လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုးနဲ မြို့လေးကို ပထမမိုးနဲ, ဒုတိယမိုးနဲ, တတိယမိုးနဲဆိုပြီး ခေတ်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲ သက်မှတ်ထားတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်. သဒ္ဓါတို့ ရောက်နေတာကတော့ တတိယမိုးနဲပါ ..
ရှေးဟောင်းလက်ရာစေတီပုထိုးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မိုးနဲမြို့လေးက မီးဘေး အကြိမ်ကြိမ် သင့်ခဲ့ရလို့ တိကျတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ မသိရတာတော့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေနဲ့ အေးချမ်းလှတဲ့ မြို့လေးမှာ လည်ပတ်စရာတွေ စေတီပုထိုးနဲ့ ကျောင်းကန်တွေ အများကြီးရှိလို့ TD အချိန်ရသလောက် လေ့လာမှတ်သားပြီး လည်ခဲ့ပါတယ်။
သဒ္ဓါတို့ ရန်ကုန်က နမ့်စန်ကိ်ု နေ့လည်ရောက်တာနဲ့
ထင်းရှူးမြိုင် ဟော်တည်မှာ အထုတ်ချ ရေမိုးချိုးပြီး
ဟော်တည်က စီစဉ်ပေးတဲ့ ကားနဲ့ပဲ မိုးနဲမြို့ကို လာ်ပတ်ခဲ့ပါတယ် လည်စရာတွေအရမ်းများလို့ အဓိက နေရာတွေကိုပဲ အချိန်ရသလောက် စုံအောင် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြို့အဝင်ကြာဖူးကတော့ စော်ဘွားတွေလက်ထပ်ကတည်းကရှိနေပြီး ပထမကြာဖူး၊ ဒုတိယကြာဖူး ၂ ခုရှိပါတယ်။ ပထမကြာဖူးမုခ်ဦးက ဘုရင်တွေ ကြွလာတဲ့အခါ ငယ်ကျွန်များနဲ့ ကြိုဆိုတဲ့နေရာလို့ သိရပါတယ်၊ ဒုတိယကြာဖူးကတော့ စစ်သည်များ မှူးမတ်များနဲ့ ကြိုဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကြာဖူးတွေ့ရင် မိုးနဲမြို့ရောက်ပါပြီ။ သဒ္ဓါ အစဉ်လိုက် လမ်းကြောင်းသင့်တဲ့နေရာတွေကို ရေးပေးထားပါတယ်😇
ရွှေရောင်တိုင်လုံးကြီးများနဲ့ ရွှေရောင်ခြယ်မှုန်းထားသော ဆေးရေးပန်းချီများကို နှစ်ရာကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ လွိုင်းလင်းကျောင်းမှာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ကျောင်းထဲက ရွှေရောင်ဆေးရေးအနုပညာများက နှစ်ရာကျော် သက်တမ်းရှိပေမယ့်လည်း ယခုအချိန်ထိ အရောင်မမှိန်ပဲ အကောင်းအတိုင်းတွေ့ရတာကတော့ ထူးခြားလှပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးမှာ ရှေးဟောင်း မွေတော်စေတီများကိုလဲ တွဲလျက်တွေ့မြင်ရပါတယ်။
လွိုင်လင်းကျောင်း ရွှေရောင် တိုင်လုံးများ
မွေတော်စေတီစုကတော့ ရှေးဟောင်းလက်ရာများနဲ့ ပျက်ဆီး ပြိုပျက်နေတဲ့ စေတီအစုများ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့ စေတီတွေဆို အုတ်ခဲအပုံလိုက်နဲ့ ပျက်ဆီးနေတာ အင်မတန် ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ မွေတော်စေတီအစုထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ရှေးဟောင်း အငွေ့အသက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်ရပြီး အရင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ၊ မွေတော်စေတီစုဘေးမှာ ညောင်မြိုဘုရားဆိုပြီး ဘုရားတစ်ဆူရှိပါတယ်။
သိရသလောက်က ဘုရားတည်ပြီး သဘာဝအတိုင်း ညောင်ပင်မြိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီး ကြည့်ရတာတော်တော် သပ္ပာယ်ပါတယ်။
ညောင်ကိုင်းဆက်ကလည်း လမ်းမပေါ်မှာပါပဲ။ ထူးခြားစွာ ဝဲ ယာ တစ်ဖက်တချက် ညောင်ပင်နှစ်ပင်ရဲ့ အကိုင်းက သဘာဝအတိုင်းဆက်နေတာပါ။
မိုးနဲဒေသခံတွေက ညောင်းကိုင်းဆက်အောက်ကနေ ဝင်သွားပြီး ဆုတောင်းရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ရှေးဟောင်း စိန်တောင်စေတီကတော့ညောင်ကိုင်းဆက်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာပဲရှိတာပါ။
(၆) ဒေဝီ ၁၂ပါးဂူ
ဒေဝီ၁၂ ပါးဂူတောင်ထိပ်မှ မြင်ရသော မိုးနဲမြို့လေး
ဒေဝီ ၁၂ပါးဂူကတော့ သဘာဝထုံးကျောက်ဂူတစ်ခု
ဖြစ်ပြီး မိုးနဲမြို့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ သမိုင်းထဲကနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းက ဘုရင်ရဲ့ မိဖုရား ဒေဝီ ၁၂ပါးကို ဘီလူးမကြီးက မနာလိုမုန်းတီး၍ မျက်စိကွယ်အောင်လုပ်ပြီး ဒီဂူထဲမှာ ထည့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂူနားမှာ ဒေဝီ၁၂ပါးတောင်လဲရှိပြီး နဲနဲတော့ တက်ရပါတယ်။ တောင်ထိပ်ကနေ မိုးနဲမြို သဘာဝရှုခင်းများကို မြင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေဝီ ၁၂ ပါးဂူ
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၃၁၇၉ ပေအပေါ်က မိုးနဲမြို့လေး
ဦးသီလကျောင်း အတွင်းမှ ရုပ်ပွားတော်
ဦးသီလကျောင်းကတော့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်သက်မှတ်ထားတဲ့ ကျောင်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ သိမ်ထဲတွင် ကျောက်မျက်ရတနာများ စီခြယ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၈) အရိပ်မထွက် နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူဘုရား
အရိပ်မထွက် နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူ ဘုရား
ထူးခြားချက်ကတော့ နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူဘုရားရဲ့အရိပ်ဟာ ပရဝဏ် အတွင်းမှာ မပေါ်ပဲ နောင်ကျော့ချောင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ အရိပ်သွားပေါ်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်
မိုးနဲမြို့၏ အထင်ကရ ဆင်တောင်စေတီ
ရှေးဟောင်းအငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ မိုးနဲ မြို့လေး
ဆင်တောင်စေတီကတော့ မိုးနဲမြို့ကို နီးနီးကပ်ကပ်မြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ တောင်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၈၆ ခုနှစ်လောက်တည်းက တည်ထားတဲ့ စေတီဖြစ်ပြီး
တောင်ထိပ်မှာ ထုံးစေတီနဲ့ view point ရှိပါတယ်။
တောင်အောက်မှာတော့ နဂါးခေါင်းရေကန်ရှိပြီး အလည်မှာ နဂါးခေါင်းရုပ်ရှိပါတယ်။ နဂါးခေါင်းရုပ်က မိုးနဲမြို့တွင်ရှိပြီး နဂါးအမြီးက ယိုးဒယားဖက်တွင်သွားပေါ်တယ်လို့လဲ ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။ ဒီတိုင်းကြည့်ရင် သာမန်နဂါးခေါင်းပေမယ် မြင်သမျှတိုင်းက သူ့သမိုင်းနဲ့ သူရှိနေတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာမြို့လေး တစ်မြို့ပါ။
ဆင်တောင်စေတီ အောက်မှာ ရှမ်းပုဂံလို့ တကယ် တင်စားထိုက်ပါတယ်
မိုးနဲဟော်နန်းကတော့ ၁၉၅၁ ခုနှစ်လောက်က တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးအဖြစ် သက်မှတ်ထားပါတယ်။ ဟော်နန်းရှေ့မှာ နွားရုပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ကျိုင်းတုံစော်ဘွားက ထိုနွားရုပ်ကလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး
မိုးနဲစော်ဘွားက နယ်မြေအချို့ကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့
တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟော်နန်းခြံဝင်းအပြင်ဘက်မှာတော့ မာလိန်တိုင်ကို
တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မိုးနဲမြို့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့နှင့် အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ မာလိန်တိုင် (မီးလင်းတိုင်)မှာ ဆီးမီးများထွန်းညှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ကျိုင်းတုံ စော်ဘွား လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ နွားရုပ်
(၁၁) စက်တော် သဘာဝရေထွက်နှင့် ဘေးမဲ့တော
စက်တော် သဘာဝရေထွက် ဘေးမဲ့တော
မိုးနဲအပြန်လမ်းဘေးတွင် တည်ရှိနေတဲ့ ဘေးမဲ့တော တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲတွင် သဘာဝရေထွက် တစ်ခုရှိပြီး ငါးစာများလဲကျွေးလို့ရပါတယ်။
တောင်ပေါ်မှာတော့ ရှင်မဟိံသရဲ့ ဘယ်ဘက်
ခြေတော်ရာရှိပြီး အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာတော့ စက်တော် ဘေးမဲ့တောကို လာရောက် လည်ပတ်သူတွေများတယ်လို့သိရပါတယ်။
IG – aye_thader_Hlaing —
နောက်ထပ် လည်ပတ်စရာများလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ သဒ္ဓါကတော့ နေ့တစ်ဝက်နဲ့ လည်ရတာမို့ အထင်ကရနေရာတွေပဲ လည်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးနဲမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကနေ နမ့်စန်ကားတွေရှိပါတယ် သဒ္ဓါတို့ကတော့ ဒို့ညီနောင် ဆိုတဲ့
ရန်ကုန် – နမ့်စန် တိုက်ရိုက်ကားစီးပြီး ထင်းရှူးမြိုင် ဟော်တည်မှာ တည်းပါတယ်။
ဟော်တည်ကတော့ တစ်ခန်းကို ၂၅၀ဝ၀ / ၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပါတယ်။ ရောက်တာနဲ့ ထင်းရှူးမြိုင်ဟော်တည်က ကားစီစဉ်ပေးပြီး မိုးနဲမြို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ယင်းနက်၊ ယင်းကြားရွာများလဲရှိပါသေးတယ်
နမ့်စန်နဲ့ မိုးနဲကတော့ ၁ နာရီလောက်ပဲကားမောင်းရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီတွေနဲ့လဲသွားရောက်လည်ပတ်လို့ရပါတယ်။ လည်စရာတွေများလို့ တစ်နေကုန် အချိန်ပေးနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ရှေးဟောင်းအငွေ့အသက်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး လည်ပတ်သူ နဲပါးသေးတဲ့ မိုးနဲမြို့လေးကို လာရောက်လည်ပတ်စေချင်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ရဲ့ Hidden gems လေးအဖြစ် တိမ်မြုပ်နေတဲ့ မိုးနဲမြို့လေးကို ဒီထက်မကလဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ခရီးသွားများနဲ့ စည်ကားစေချင်မိပါတယ်…….
သမိုင်းကြောင်းက ဒေသခံတွေပြောပြသလောက်ပဲသိရတာမို့ အမှားပါခဲ့ရင်လဲ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်
သိချင်တာများရှိသေးရင်လည်း Chat box မှာ လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
စာအရှည်ကြီးကို အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏🏻
Credit : https://www.facebook.com/TravelholicThader/